गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, तिलौराकोट र मावली रामग्राम (नवलपरासी) मा २५ सय वर्षअघि कुन प्रजातिका रूख थिए होलान् ? तीमध्ये कति प्रजाति बाँकी होलान् ?
पर्यटन वर्ष र अन्तर्राष्ट्रिय वन वर्षको अवसरमा बुद्धकालीन रूखका प्रजाति लगाउन अभियान थालिएको हो । 'लुम्बिनी क्षेत्रमा बुद्धकालीन परिवेश निम्त्याउन खोजिएको हो,' वन मन्त्रालयका सचिव युवराज भुसालले भने, 'त्यसो हुँदा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लुम्बिनीको महत्त्व बढाउन मद्दत पुग्छ ।' सरकारले सन् २०११ लाई 'प्लान्ट होलिडे' घोषणा गर्दै काँचा रूख नकाट्न भनेको छ ।
यही आर्थिक वर्षभित्र कपिलवस्तुको लुम्बिनी र तिलौराकोट, रूपन्देही र नवलपरासी (रामग्राम) मा बुद्धकालीन रूखका प्रजाति लगाउन थालिने वन सचिव भुसालले बताए । 'लुम्बिनी क्षेत्रमा बुद्धको समयको वातावरणलाई ब्युँताउने प्रयास हो,' भुसालले भने ।